Guddoomiyaha Wargeyska Madaxa-banaan Ee Saxafi Oo Xabsiga Loo Taxaabay | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Guddoomiyihii Wargeyska Madaxa-banaan ee SAXAFI oo kasoo baxa Hargeysa Cabdifataax Maxamuud Caydiid, ayaa xalay saqdii dhexe ee ay ciidamada amaanku ka soo xidheen xarunta Wargeyskaasi ee Magaaladda Hargeysa, iyadoo la geeyay
xarunta Baadhista denbiyada ee CID.
Guddoomiyaha Wargeyska Saxafi ayaa sida ay wararku sheegayaan lagu xidhay amar ka soo baxay Taliyaha ciidamada sirdoonka Qaranka oo dalka debeda kaga maqan, kaas oo amray in la xidho Wariye Cabdifataax Caydiid.
Ilaa hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambaysa xadhiga Wariyaha, balse waxa jira warar sheegaya in xadhigiisu la xidhiidho iyadoo wargeyska Saxafi baaiyay warar ku saabsan dad ajaanib ah oo kusoo jeeday Somaliland, kuwaas oo u socday hawlo dhinaca amaanka ah, isla markaana wada shaqayn la leh sirdoonka qaranka.
Xadhiga wariyahan ayaa waxa cambaareeyay ururada saxaafada Somaliland, waxayna ku tilmaameen in xadhiga Wariyahani muujinayo sida xukuumaddu u cabudhinayso xoriyatul qowlka isla-markaana aanay raalida uga ahayn in xaqiiqda laga waramo.
Ciidamada amaanka ee Wariyaha xidhay ayaa xoog ku galay xarunta Wargeyska, iyagga oo si khasab ah xarunta ugala baxay weriyaha oo ah gudoomiyaha wargeyska.